साउदी अरबसँग जोडिएका यी रोचक तथ्यहरु, जहाँ तेल भन्दा पानी महंगो ! - Medianp
साउदी अरबसँग जोडिएका यी रोचक तथ्यहरु, जहाँ तेल भन्दा पानी महंगो !
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २५, २०७४१८:१६0
एजेन्सी। साउदी अरबको नाम सुन्‍नेबित्तिकै सबैले तलको भण्डार भनेर चिनिने गर्दछन्। तर साउदी त्यो भन्दा पनि धेरै कुरामा फरक भइसकेको छ। यहाँको कला, परम्परा तथा फरक प्रकारको छ। संरकार र संस्कृतिमा संसारकै छुट्टै देशमा पर्दछन्। साउदी अरब अरुभन्दा
किन भिन्न छ भनेर यहाँ रोचक तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ।
प्राय मुस्लिम भएको देश साउदी अरबमा देशको छुट्टै संविधान छैन्। यहाँ मुस्लिमहरुले मान्दै धार्मिक कुरानलाई नै उनीहरु संविधानको रुपमा मान्दै आएका छन्। उनीहरुले कुरान अनुसार आफ्नो परम्परा र संस्कार, संस्कृति धान्दै आएका छन्।
आधा जनसंख्या युवा
यदि साउदी अरबमा जनसंख्याको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ आधा भाग युवाले ओगटेका छन्। प्रत्येक तेस्रो व्यक्ति ३५ वर्षभन्दाका छन्। तर महिलाको संख्या भने पुरुषको तुलनामा कम छन्। पुरा जनसंख्याको प्रतिशत १.३ हिस्सा ओगटेका छन्।
महिलालाई कार चनाउन मनाही
साउदीमा महिलालाई कार चाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। किनकी महिलाले घरबार सम्हाल्ने भएको हुँदा यहाँका पुरुषहरुले उनीहरुलाई कार चलाउँदा धर्मवपरीत हुने भन्दै रवक लगाएका छन्। तर पनि यसबारेमा महिला अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाए/ प्रदर्शन गरे पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन्।
मक्का मदीनामा गैर मुसलमान जान प्रतिबन्ध
सबैलाई थाहा छ की मुस्लिमको धर्मको पवित्र शहर मक्का मदिना हो भनेर। यहाँ प्रत्येक वर्ष मुस्लिम समुदाय इद मनाउन विभिन्न देशबाट आउने गर्दछन्। तर यही पवित्र मन्दिरमा भने गैर मुस्मिलमलाई प्रवेश गर्न दिइदैन। यहाँ आउने तीर्थ यात्रीलाई साउदीले नै नियन्त्रणमा राख्ने गर्दछन्।
सन २०११ मा महिलालाई भोट हाल्ने अधिकार
साउदी महिलालाई पहिलो पटक सन् २०११ मा भोट हाल्ने अधिकार दिइएको थियो।
सबैभन्दा ठूलो मरुभूमी
साउदी अरबमा संसारको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमी रहेको छ। जुन २५ हजार स्वायर माइलसम्म फैलिएको छ। यसलाई संसारमै सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ।
पानीको स्रोतको कमी
यहाँ पानीको ठुलो स्रो भने छैन। यहाँ पानीलाई दुर्लभ चीज मानिएको छ। तर पनि साउदी एउटा यस्तो देश हो जसले समुन्द्रको पानी पिउने लायक बनाउदै आएका छन्।
तेलको खानी, विश्वभर आयात
यहाँ पानीको अभाव भए पनि तेलको भने खानी नै रहेको छ। साउदी अरबले विश्वभरका मुलुकमा तेलको आयात गर्दै आएको छ। यहाँ तेल सस्तो छ, पानी निक्कै महंगो छ।
सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान मनाही
साउदीमा सार्वजनिक रुपमा ध्रुमपान गर्न महानी छ। यो नियम सन् २०१२ देखि सरकारले लागू गरेको थियो। एक तथ्याङकका अनुसार यो देशका मानिसले करीब ८ डलर प्रत्येक दिन सिगरेटमा खर्च गर्ने गरेका छन्।
साइडवाक गर्न मन पराउने बढी
यहाँका मानिसहरु साइडवाक गर्न धेरै नै मन पराउँछन्। यहाँ एक तरिकाको खेल रहेको छ जुन २ चक्का भएको कार चलाउने चलन छ।
ऊटको सबैभन्दा ठूलो व्यापार
साउदीमा ऊटको बैभन्दा ठूलो व्यापार हुने गरेको छ। यहाँ प्रत्येक दिन करीब एक सय ऊट किनबेच हुने गरेको छर
गैर मुस्लिमलाई साउदीको नागरिकता लिन रोक
गैर मुस्लिममले साउदी अरबको नागरिकता लिन पाउँदैनन्। यो देशमा गैर मुसलिमलाई पूजा गर्ने स्वतन्त्रता नै छैन्। गरै मुस्लिममले गरेको प्रदर्शन पनि अपराधान मानिन्छ।
एउटा पनि फिल्म हल छैन
साउदीमा एउटा पनि फिल्म हल छैन। यहाँका मानसहरुलाई फिल्म हलमा गएर फिल्म हेर्न मनाही छ।
घाँटी काट्न,अंग विच्छेद गर्न तथा ढुगा हान्ने सजाँय
साउदीमा घाँटी काट्न,अंग विच्छेद गर्न तथा ढुगा हान्ने सजाँय दिने गरिन्छ।
महिलालाई एक्लै परपुरुषसँग हिड्न मनाही
यहाँ एक्लै महिलालाई पर पुरुषसँग हिड्न सशक्त महनही छ।
फोटो खिच्न पाइदैन
सन् २००६ सम्म यहाँ सार्वजनिक रुपमा तस्बिर लिन मनाही थियो। तर अहिले पनि यदि तपाईले फोटो लिएको पुलिसले भेट्यो भने तपाईलाई
२०१८ सम्ममा विश्वकै ठूलो टावर बन्ने
२०१८ सम्ममा विश्वकै ठूलो टावर बन्ने छ। जसको उचाई ३ हजार २ सय ८० फिट रहनेछ। यो टावरमा होटल तथा अफिसहरु रहनेछन्। यो नयाँ जमानाको इन्जिनियरिङको उत्कृष्ट नमुना हुने दाबी गरिएको छ।
गंगालाल अस्पतालको गेटमै क्रिश्चियनको धर्म प्रचार, युवती धर्म परिवर्तन गर्न उक्साउँदै (तस्विर)
देउवा सरकारमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिए, शपथ भोलि